That's so good, right?: October 2014
ဖြေ။ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်တယ်၊ ရေများများသောက်တယ်၊ အဲဒီလောက်ပဲ။ ကျမ ဟော်မုန်းဆေးတော့ စားတယ်ရှင့်။
ခွဲစိတ် ပြုပြင်တာမျိုးတော့ မရှိဘူး။ ကျမရဲ့ ခါးဆိုဒ်က ၂၄၊ အရပ်အမောင်း ၅ ပေ ၆ လက်မခွဲ၊ ရင်က ၃၂၊ တင် ၃၄ ခွဲပါရှင့်။
Credit To ဧရာဝတီဘလော့ခ်
Posted by Alex Aung at 6:24 PM No comments:
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ခပ်တိုတိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လည်းဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်လုံးလိုလို ထိတာနဲ့ ဒေါင်ဆိုပြီး စိတ်ထန်တတ်တဲ့အရွယ် ကျွန်တော်ပေါ့။ အမှတ်မထင်တို့ အမှတ်ထင်ထင် တို့ဆိုတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောပြန်ပြရရင် အဲဒီတုန်းက အရပ် ၅ပေ၈လက်မ ၀န်းကျင်၊ ပေါင် ၁၄၀လောက်ရှိပြီး ချောမွေ့သောအသားအရေ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အခုတော့ အရပ်ကပိုရှည်နေပါပြီလေ။ ဆိုလိုတာက အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်ကာလအရွယ် ထိတိုင်းထ တတိုင်းရ အရွယ်ကအဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်။
အခု ကျွန်တော့်အရပ်က ၅ပေ ၁၁လက်မဖြစ်ပြီး ပေါင်ချိန်က ၁၅၀လောက်ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ သင်တန်း အချို့တက်နေတဲ့ အတန်းဖော်တွေကြားထဲ ထင်ရှားနေသော ငထွားလေးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ဘာဆိုတာ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ဖို့တော့ ကျွန်တော်ကြောက်တယ် အဖေတို့အမေတို့က တကယ့် homophobic တွေလေ။
ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတဲ့ ငနဲရဲ့နာမည်က ညီဇော်တဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းအလန်းဇယားလုပ်တတ်တဲ့သူပေါ့။ အရပ်ကတော့ ၅ပေ၁၀လက်မ လောက်ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်က အကျစ်ပုံစံ။ ဖြစ်စဉ် အချိန်ကတော့ သူ ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၃နှစ်ကြီးပါတယ်။ သူက အမြဲလိုလို ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို ၀င်ထွက်သွားလာနေတတ်တယ်ဗျ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းလာကစားတာတို့ စာအုပ်စင်လာမွှေပြီးဖတ်တာ စသဖြင့်ပေါ့။
အင်း….တစ်ညမှာပေါ့ အိမ်က ဧည့်ခန်းထဲမှာ စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာချပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်။ Mexican Style အိပ်ကြမည်ပေါ့လေ ဟီး ဟီး။
ညီဇော်က ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း အိပ်ပျော်သွားတာကို ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဗျ။ သူ့အောက်ပိုင်းကို စောင်ပါးကိုမခြုံဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှဲနေတာလေ။ အဲ..ပေါင်လယ်လောက်ရှိမယ့် အနက်ရောင် အားကစားဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်တော့ဝတ်ထားပါရဲ့။ သူ့ခြေတံလက်တံတွေမှာ အမွှေးနုလေးတွေရှိပြီး ခပ်လျောလျော ဘောင်းဘီတိုကနေပေါ်နေတဲ့ တင်သားအစလေးကလည်းဝင်းလို့ပါ။
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကိုတို့ကတော့ စကားပြောလိုက် ရယ်မောလိုက်နဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကြည့်နေဖြစ်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်မကြာခဏ ဆိုသလို ညီဇော့်ကို လှည့်လှည့်ကြည့်မိပါတယ်။ ၀ိုး….သူ့ငပဲကြီးမာတောင့်နေပါလား။ အဲ..အဲဒါကြီးက သူ့-ီးကြီးပါလားနော်။ Damm.. ကျွန်တော် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုကိုယ့်ဖာသာလျှာနဲ့သရပ်မိပါရဲ့။
ကျွန်တော် အကြည့်မလွှဲစိုက်ကြည့်နေမိတော့မတတ်ဖြစ်တာကို မနည်းဘရိတ်အုပ်ကာ ရုပ်ရှင်ကိုဆက်ကြည့်ရတယ်။ သူ့အဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်သူမှ မကြည့်မိပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရပါရဲ့။ ဆောင်ပါးလေးကို မသိမသာခြုံလွှမ်းပေးလိုက်ရင်းပေါ့လေ။
ညလည်းနက်လာပြီဆိုတော့ လူတိုင်းကိုယ်စီ အိပ်ရာဝင်ကြပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ ဆိုဖာပေါ်ဝယ်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် ပြီးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှိလူတိုင်း အိပ်ပျော်သွားမယ့်အချိန်ကို ကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့ပါရော။ အချိန်က မနက် ၂နာရီလောက်ရှိမယ်။
ကျွန်တော် ညီဇော်ရဲ့ဘေးမှာ သွားလှဲအိပ်လိုက်တယ်။ အိပ်ပျော်ချင်ယောင်တော့ဆောင်ရတာပေါ့။ မကြာပါဘူး သူ့ငပဲကို စတင်ထိကိုင် ကြည့်ပါတယ်။ စစခြင်းတော့ သူ့ဘောင်းဘီအတိုပေါ်ကနေစမ်းကိုင်ရတာပေါ့။ နည်းနည်းပျော့နေတာတောင် အတုတ်ကြီးပဲဗျ။ သူ့ပါးစပ် က ဟောက်သံတိတ်သွားတော့ ကျွန်တော့်လက်ကိုမြန်မြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်စမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့ သူ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မာတောင့်လာတာကိုသတိထားမိပါရဲ့။ အိုး…တော်တော်ကြီး လာတာပါပဲလား။ ငပဲတစ်ချောင်းဟာ ဒီလောက်ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားမိပါဘူး။ ကျွန်တော် တော်တော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမိ သလို ကြောက်လဲကြောက်မိတယ် တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုပါပဲ။ ပြီးပြန်တော့ ကျွန်တော် သူ့ရှပ်အကျီင်္လေးကို ဗိုက်ပေါ်အောင်လှန်လိုက် တယ်။
ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးအစပ်ကနေ တကယ့်ဖြေးဖြေးလေးလျှိုသွင်းလိုက်တာ သူ့ငပဲနဲ့ထိတဲ့အထိပါပဲ။ လန့်တော့လန့်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေဆိုတာဟာလေ ဗုံတီးသံလိုပဲဟိန်းနေရော။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေကလည်း သောင်းကြမ်းနေတာ ဆူပွက်နေတဲ့အတိုင်းဗျာ။ ဒီငနဲရဲ့-ီးကိုထိကိုင်မိနေတာကို ယုံတောင်မယုံချင်သလိုလိုကိုဖြစ်လို့။ အရှည်က ၇လက်မကျော်လောက်ရှိမယ် အတုတ်ကလည်း တော်တော်တုတ်သလို ထိပ်အရေပြားကတော့မဖြတ်ထားဘူးဗျ။
‘Fuck!!’ သူ့ဆီက ဟောက်သံလုံးဝမထွက်တော့ဘူး ရပ်သွားပြီ။ လုံးဝတိတ်သွားပြီဗျ။ သွားပြီ ကျွန်တော်တော့ ဖမ်းမိသွားပြီပေါ့။ သူ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ကန်ထုတ်လိုက်မလားတွေးမိပါတယ်။ လက်ကိုအမြန်ရုပ်သိမ်း တစ်ဘက်ကိုစောင်းလှည့်လိုက်ကာ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်ပါရဲ့။
မိနစ်အတော်ကြာကြာ ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ် ဘာသံမှမကြားရဘူးလေ။ နောက်တော့ သူအရွှေ့အပြုလုပ်တာကို ကျွန်တော် ခံစားရတယ်။ တော်တော့်ကို လန့်သွားမိတယ် တကယ်ပါ။ ဟောက်သံလေးပြုပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်စအပြုမှာ နား အနားကိုကပ်ပြီး သူ ခပ်တိုးတိုးပြောတယ် : Me la chupas? (ငါ့ဟာကို စုပ်ပေးမလား?)
ကျွန်တော့်အရေပြားဝယ် ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေတဗြုန်းဗြုန်းထကုန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဘက်ကိုပြန်စောင်းလှည့်လိုက်ပြီး ‘ဗျာ…ဘာပြောလိုက်တာလဲ?’
သူက သူဝတ်ထားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို ဒူးအထိ ဆွဲချထားပြီးပြီ။ ကျွန်တော်ဖြင့် အမွှေးနုတွေရစ်သိုင်းနေတဲ့ သူ့ငပဲကြီး ခေါင်းတ ဆတ်ဆတ်ငြိမ့်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်နေရတာ ယုံတောင်မယုံချင်သလိုပါပဲ။ သူ့လှုပ်ရှားဟန် သူ့ပုံစံတွေဟာ တကယ့် straight ဟန်ပန် အပြည့်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ခံစားချက်တွေက ဘယ်လိုပြောရမလဲ ‘So Good!’ ပေါ့နော်။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို မရဲတရဲကိုင်ရင်း ဟိုဆွဒီကိုင် စကစားလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း သူ့ငပဲဆီကို ငုံ့ကိုင်းစေပါရဲ့။ အရင်က ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်တွေ့တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတာဆိုတော့ ဘယ်ကဘယ်လိုစလုပ်ရမယ်မှန်းမသိတာကြောင့် ယောင်နနဖြစ်နေတာလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ငပဲကြီးက အားရစရာနဲ့ မြင်ရတာကိုကကောင်းနေတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲခေါင်းလေးကိုစငုံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရေခဲမုန့်ကိုလျက်ပြုသလိုစမ်းသပ်လိုက်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တာပေါ့။ အသာလေး ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်မိတဲ့ခဏသူက ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကိုဖိကိုင်ကာ သူ့ငပဲကိုအတွင်းထဲရောက်သထက် ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပါရော။ အာ…တော်တော်ဆိုးတဲ့လူ။
ခဏနေတော့ သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာတဲ့အရသာကို စတင်မြည်းစမ်းရပါတယ်။ သူ့ငပဲကြီးကိုပါးစပ်ထဲအထုပ်အသွင်း လုပ်ရတာ တကယ်ကိုကြိုက်သွားပြီ အားရစရာကြီးဗျ။ ကျွန်တော် သူသင်ပြတဲ့အတိုင်း ပါးစပ်ထဲမှာ သွားနဲ့မငြိအောင်ကြိုးစားသလို အထဲ ကိုပိုပိုသွင်းကြည့်တဲ့အထိရဲလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ သူ့လုပ်တာကြောင့် အော့အံမိမလိုတောင်ဖြစ်ရပါရဲ့။ ပြီးတော့ သူက ‘မင်း ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်။ ငါ 69 ဆွဲချင်လို့’ တဲ့။
ကျွန်တော့်မှာ ‘69? အဲ့တာဘာကိုပြောတာလဲဗျ’ လို့တအံ့တအော မေးမိပါတယ်။
သူက ‘အာ…မင်းတင်ပါးကြီးကို ငါစားချင်လို့ကွာ’ဆိုပဲ။
နောက်တော့ သူက ကြမ်းပြင်ပေါ်အသာလဲလျောင်းနေတာကို ကျွန်တော်က သူပြောတဲ့အတိုင်း ခွလိုက်ပြီး သူ့ငပဲကိုအပေါ်ကနေ စုပ်ရပါတယ်။ အာ…အ…အ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို လျှာနဲ့ကလိတာ ခံစားရခြင်းပါ။ အိုး….ကောင်းကင်ဘုံကို တံခါး မခေါက်ဘဲရောက်သွားရပါတယ်။ အ…အ ကြိုက်သွားပြီ။ ဒီခံစားချက်က ကျွန်တော့်ကို အရူးအမူးဖြစ်အောင်လုပ်နေသလိုပဲဗျာ။
သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးညည်းတွားပြောဆိုသံကို ကျွန်တော်ကြားဖြစ်အောင်ကြားမိလိုက်ပါရဲ့ ‘Dayum, que rico culo tienes, တင်ပါးတွေကလုံးပြီး အပေါက်လေးက ချောမွေ့နေရော’
ကျွန်တော်အဲ့စကားကြားမိတော့ ဒီလူအရင်ကလည်းလုပ်ဖူးပုံပေါ်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့များလုပ်ဖူးပါလိမ့်လို့စတွေးမိရပေါ့။
သူလုပ်နေတာကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီး ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွမ်းတယ်ဗျ။ သူက ကျွန်တော့်ကို သူ့ငပဲပေါ် ထိုင်ချဖို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကြောက်တယ် ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူက စိတ်ထဲသက်သောင့်သက် သာပဲထား တစ်ထစ်ခြင်း ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်တဲ့။
ကျွန်တော် သူလုပ်တာကို ခံလည်းခံချင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာလည်း သူလျာကျွေးထားတာကြောင့် ရွှဲနေပြီ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကို အသာလေးဖြဲကိုင်ပေးတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အပျိုစင်ခရေ၀မှာ သူ့ငပဲခေါင်းစတင်ဖိကပ် လာတာကို ခံစားရပါရော။ ကျွန်တော် ငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်လိုက်ချင်သလို အခုလုပ်နေတာကနေ ထထွက်သွားချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ထဲ တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာကို ခံစားကြည့်ချင်မိပြန်ရော။
ကျွန်တော် ကိုယ့်ရှပ်အကျီင်္ကို ကိုယ်အသာကိုက်ထားရပါတယ်။ သူ့ငပဲခေါင်းလေးဝင်အောင် အသာအထအထိုင်လုပ်ပြီးမှ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဖင်ကိုကြွလိုက် ဖိချလိုက် ဖင်ကိုကြွလိုက်ဖိချလိုက်နဲ့ ကျွန်တော်ကြိုးစားထိုင်ရရော။ သူက တကယ့်ကိုငြင်သာပါတယ် အလျင်မလိုဘဲ အသာငြိမ်ပြီး အလိုက်သင့်စောင့်ဆိုင်းပါတယ်လေ။ သူ့ပါးစပ်က ခပ်တိုးတိုးညည်းသေးတာက "Dang bien calientito que tienes ese oyito." (Damn, မင်းအပေါက်လေးကမိုက်တယ်ကွာ ကြပ်ပြီးနွေးနေတာပဲ)တဲ့။
အထုတ်အသွင်း အဆင်ချောပြီး စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်မနေတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် မြင်းစီးသလို ကဆုန်စပေါက်လိုက်ပါတယ်။ အာ…သူ့ပစ္စည်းကြီးနောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေထဲမြုပ်နေပြီပေါ့။ နာကျင်သလိုခံစားရပေမယ့် ဒီထက်ပို…ပိုပြီးခံစားချင် သေးတယ်။ Fuck….အိုး….ခံစားရတာ တကယ်ကောင်းသလိုပဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီ ၁၀မိနစ်လောက် ဆက်သွားကြသေးတယ်ဆိုပါတော့ အဲ့အနေအထားအတိုင်း။
ခဏနေတော့ သူက ‘ငါ့ကောင် ဟိုဘက်လှည့်ပြီး လေးဘက်ထောက်ကုန်းလိုက် doggy style လုပ်ရအောင်’တဲ့ပြောတယ်ဗျ။
သူပြောတဲ့အတိုင်းနေပေးလိုက်ပြန်တော့ ‘ခေါင်းအုံးကိုကိုက်ထားလိုက်’ ဆိုတဲ့ပြောစကားသံနဲ့အတူ မာတောင့်နေတဲ့သူ့ငပဲကြီးဟာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ တနင့်တပိုးထိုးဝင်လာပါတယ်။ အား…..မငြင်းပယ်ချင်တော့ဘူး သူ့ငပဲကိုသဘောကျလာပြီ…ဟုတ်တယ် ဘယ်လို ပြောရမလဲမသိဘူး အဲ့ဒီအတိုင်းခံစားရတာပဲလေ။
ကျွန်တော် အားကုန်အော်ဟစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် ခေါင်းအုံးကိုပါးစပ်နဲ့ခဲကာ မေးကြောတွေထောင်တဲ့အထိ အံကြိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်ရင်း နှေးလိုက်မြန်လိုက် စက်သေနတ်ဆွဲသလိုပစ်လိုက် မွှေလိုက်နဲ့စိတ်တိုင်းကျကိုထင်တိုင်းကြဲ နေပါရော။ ကျွန်တော့်မှာ သူလုပ်သမျှခံနေရသော ကြေးစားတစ်ယောက်လိုကိုဖြစ်နေတဲ့ မိနစ်တိုင်းအား သဘောကျမိပါတယ်။
ကျွန်တော့်နားရွက်တစ်ဖက်ကို သူကိုက်ဆွဲထားပြီး တိုးတိုးပြောပြန်သေးတာက "Pinche culo better thanahayna, bien rico." ‘မင်းဖင်ကိုလုပ်ရတာ မိန်းကလေးတွေကိုလုပ်ရတာထက်ကောင်းတယ်ကွာ…တကယ်မိုက်တယ်’ဆိုပဲဗျ။
သိပ်မကြာသောအချိန်မှာတော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပိုပြီးလာက ငပဲကိုအထုတ်အသွင်းလ်ုပတာလည်းပိုမြန်လာတယ်။ အားရလိုက်တာ…."Me vengo! Ya me vengo! Ready for your lechita.(ငါ ငါ ပြီးတော့မယ်….ပြီးတော့မယ် အာ ပြီးတော့မယ်) လို့အဆက်မပြတ်သူ့နှုတ်ဖျားကဆိုလာပါပြီ။
အာ…ကျွန်တော်သည်လည်းပဲ သူ့ငပဲရဲ့မွှေချက် အထုတ်အသွင်းပြုလုပ်ချက်တွေကြောင့် ဆီးသွားချင်သလိုလို အခင်းကြီးသွားချင် သလိုလိုခံစားရကာ လက်နဲ့အသာကိုင်တွယ်မိစဉ်လေးမှာပဲ သုက်ရည်တွေကို အများအပြား ကြေနပ်မိန့်မူးစွာပန်းထုတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေ ခရေကြွက်သားတွေက အားရပါးရသူ့ငပဲကို ညှစ်ပြုမိလိုက်တော့ သူသည်ကျွန်တော့်ခါးအစုံကိုလက်နှင့် ဖျစ်ညှစ်ထိန်းကိုင်ကာ သူ့ဆီးစပ်နဲ့ကျွန်တော့်တင်သားတွေကပ်တဲ့အထိ ဖိဖိလိုက်ရင်း သူ့သုက်ရည်တွေကို ပစ်သွင်းတယ်လေ။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက်တော့ ရှော့်ခ်ဖြစ်ရသလို ကျေနပ် သာယာမိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက် မိသလို ခင်ဗျားဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံသူပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက ‘ကျေးဇူးတင်စကားပြောစရာမလိုပါဘူး ကွာ၊ မင်းတို့တစ်မိသားစုလုံးရဲ့ မိတ်ဆွေပဲဟာ, pa eso estoy cuando quieras’(မင်းဘယ်အချိန်ဘာလိုချင်ချင် အကူအညီရအောင်ငါရှိနေမှာပါ) တဲ့ဗျာ။
Alex Aung (28 Oct 2014)
I wish all of you’ll haveaHappy Halloween.
ပုံပြင်တစ်ပုဒ် သို့မဟုတ် အခုထိတိုင် တစ်ယောက်ယောက်ကိုမပြောပြရသေးသောအကြောင်အရာတစ်ခု ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်း အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားသောအရာတွေကြောင့် မပြောပြ မဖော်ပြဖြစ်သော ပုံပြင် သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်လေ။ နာကျင်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်ရစရာများစွာကို ပြန်လည် ခေါ်ဆောင် သတိရစေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အဲ….အမြဲလိုလို ကျွန်တော် တွေးမိရတာက ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်လေးဟာ ဘယ်လောက် ဦးနှောက်မရှိခဲ့သလဲ ပြီးတော့ ကလေးဆန်လိုက်သလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေတော့ နည်းနည်းချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။
ကျွန်တော် ကောင်ကလေးအရွယ် ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ အဖေရယ် အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ် အဖိုးနဲ့အဖွားတို့ဆီကို အနည်းဆုံး တစ်လ တစ်ခေါက် သို့မဟုတ် နှစ်ခေါက်တော့အလည်သွားဖြစ်ကြတယ်။ တနင်္ဂနွေတစ်ရက် မိသားစုကားလေးကို အဖေမောင်းတာ နှစ်နာရီခရီး လောက်မောင်းရတယ် ထင်တယ်ဗျ။ အဖေက သွားတဲ့ခရီးမဆုံးခင် အမြဲလိုလို ခဏတဖြုတ်တော့နားလေ့ရှိတယ်။ သူပြောတာကတော့ ခြေခင်းလက်ဆန့် အညောင်းအညာမမိအောင်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိနေပါတယ် သူ နယ်တွေမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားသွား နေရတုန်းက ဒဏ်ရာရခဲ့ဘူးတဲ့ ခြေထောက်ကြောင့်ဖြစ်မှာလို့ပေါ့။ အဖေက သူ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကိုစကားများ များပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုကိုသာမျှဝေချင်တတ်တဲ့ အဖေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးလမ်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်အရောက် ယာဉ်ရပ်နား စခန်းတစ်ခုမှာ ထုံးစံအတိုင်း အဖေ ကားရပ်နားခဲ့ပါရဲ့။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ ဒီလို ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခရီးဝေး သွားတဲ့ ကားသမားတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ပုံစံရှိတဲ့ နေရာပေါ့။ စတိုးဆိုင်ငယ် စားသောက်ဆိုင်ငယ်လေးတွေ သန့်စင်ခန်းတွေ ယာဉ်ပျက်ရင် ပြင်ဆင်လို့ရမယ့် ၀ပ်ရှော့ပ်ငယ်လေးတွေပါဝင်တတ်တဲ့ အဆောက်အအုံအစုလေးပါပဲ။ မိသားစုအလိုက် နားနေဖို့လုပ်ပေး ထားတဲ့ ခုံတန်းလျားအချို့ဘေးမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် သို့မဟုတ် လိုအပ်သူတွေ ယူနိုင်မယ့် ခရီးသွားမြေပုံလေးတွေ၊ စာအုပ်ငယ်လေးတွေ၊ ပြီးတော့ ပြည်တွင်း နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာအချို့ထားပေးထားပါတယ်။
အဆောက်အအုံကြီးနဲ့ မနီးမဝေး၀ယ် စားသောက်စရာတွေ တင်စားလို့ရမယ့် စားပွဲတွေ ဟိုသည် အပြန့်အကျဲ တစ်ဒါဇင်လောက်ရှိ မလားဘဲတွေ့ရသေးတယ်။ တစ်ယောက်ယောက် ထိုင်စားနေတာမျိုးကိုတော့ အတွေ့ရနည်းပါတယ်။ အင်း….ကျွန်တော့်မိဘတွေ ကတော့ တစ်မူထားပါတယ်။ စားသောက်စရာတွေကို အဲ့လိုစားပွဲခုံတစ်ခုခုမှာခင်းကျင်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားသောက်တတ် ကြတဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ သစ်တော အစပ်နားက ခပ်မြင့်မြင့် အရွက်နီနီတွေရှိတဲ့ Maple ပင်နားက စားပွဲခုံနားမှာ အဖေကအမြဲထိုင်စေ ခဲ့တယ်။ အဖေပြောတာကတော့ အဖိုးတို့အဖွားတဲ့မွေးတဲ့ ဇာတိမြေမှာ ဒီလိုအပင်တွေက ရှားရှားပါးပါး အများကြီး ပေါက်တတ်တယ်တဲ့။ အဖေရဲ့ ပြောစကားတွေကြောင့်ကော သစ်တောစပ်ဝယ် ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတွေကိုစားရတာ ကြောင့်ရော နောက်ပိုင်း ဘာမှန်း မသိ ဒီအခြေအနေ ဒီမြင်ကွင်းကို စွဲမက်လာခဲ့ပါတယ်။
နှစ်အတော်များများကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက်မှာတော့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွေတိုင်းရဲ့ အနားယူရန်နေရာတိုင်းမှာ Maple ပင် တစ်ပင်ပင် တော့ရှိနေတတ်တာကိုကြည့်မြင်ပြီးမှ ပြည့်စုံသလိုခံစားရပါတယ်။ အင်း….ဒီလိုခံစားချက်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ နေရာယူလာသလို များပြားလာခဲ့ပါရဲ့။
ဆောင်းရာသီရဲ့ နေ့လရက်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မမေ့နိုင်စရာအကောင်းဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ပွဲစားသဘော ထွက်ဖို့ သို့မဟုတ် အနားယူတဲ့ စားပွဲခုံတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ဖို့အတွက်တော့ အရမ်းအေးလွန်းသလိုပါပဲ။ Maple သစ်ပင်ခမျာလည်း အရွက် တွေမရှိတော့သလို လက်ကျန်သစ်ရွက်တွေကလည်း အရောင်ကင်းမဲ့ကုန်ပါပြီ။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်အရွယ်တုန်းကတော့ ကျွန်တော့် အဖေက ရှင်းပြခဲ့တယ် အဲဒါ သစ်ပင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာတဲ့။ ရာသီဥတု အရမ်းအေးတဲ့လတွေဆိုရင်တော့ အပြင်ဘက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကြာရှည်နေလေ့မရှိခဲ့ကြဘူး။ ရပ်နားစခန်း အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲက ခုံတန်းလျားရှည်ကြီးတစ်ခုမှာပဲ အဖေက ခြေခင်းလက်ဆန့်နေ တတ်ပြီး အမေကတော့ စတိုးဆိုင်က ချိုချဉ်ပြားတွေ လှတပတ ချောကလက်လေးတွေဝယ်ကျွေးတတ်တာမှတ်မိပါသေးတယ်။ မကြာခင် မှာတော့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်တစ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြန်ပေါ့နော်။
နွေဦးရာသီမှာတော့ Maple သစ်ပင်တွေ နိုးထလာကြပါပြီ။ ၀ါစိမ်းနုရောင် သေးငယ်သော ဖူးအငုံလေးတွေဟာ သစ်ကိုင်းတလျောက် အလျင်အမြန်ကိုပဲ တောက်ပသော သစ်ရွက်များအဖြစ် ပြည့်နှက်ကုန်ပြန်တော့ သူ့ဘ၀လေးပြန်လည်ပြည့်စုံသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ ဒုတိယ နွေဦးရာသီရောက်ချိန်မှာတော့ သစ်ကိုင်းတွေဟာ သူတို့အပေါ်တွယ်တက်လို့ရတဲ့အထိ ခိုင်ခံ့ကြီးမားကုန်ပါရော။ (ကျွန်တော့် အဖေက ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်ထိုင်ကြည့်ဖို့အမြဲလို ချီမပြီးတင်ပေးတတ်သေးတာပါ။) အညိုရောင် ရှဉ့်ငယ်လေးတွေ၊ အမျိုးစုံသောငှက်ငယ် လေးတွေ စတဲ့ တောသဘာဝ အကောင်ငယ်လေးတွေကို ယာဉ်ရပ်နားချိန် မိနစ် ၂၀ရချိန်လေးမှာ ဒီသစ်ကိုင်းတွေပေါ်ထိုင်ရင်း အကြိမ်များစွာ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်မမြင်ဖူးတဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသကရှဉ့်အမျိုးအစားတွေကိုမြင်ဖူးခဲ့ရပြီး သမင်အချို့ကို နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရသေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် အဲဒီအပင်ရဲ့ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို တကယ်ကြိုက်တယ်။
နွေရာသီနေ့ရက်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပူပြင်းပြီး တစ်ခါတလေတော့ အရမ်းစိုစွတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနေ့ရက်တွေဆိုရင် သစ်ပင်တွေရဲ့ အရိပ်တွေဟာ နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းတန်းတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့အကာအကွယ်ပေးပါရော။ အေးမြတဲ့အရိပ်ဟာ ထီးမလိုပဲ အေးမြနေတတ်တာပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်းနေတတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်က အဲ့ဒီ အေးမြတဲ့အရိပ်မှာထိုင်ငေးရခြင်းက လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မှာ။ နောက်ပိုင်းမှာ မြောက်များစွာသော သစ်ပင်တွေ အကြောင်း၊ အောက်ဆီဂျင်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ် ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကို လေ့လာဖို့ဖန်တီးပေးတဲ့အရာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထုတ်ပေးသော သန့်စင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဆုတ်တွေသန်မာပြီး အသက်ရှင်ရတာ ပြီးတော့ စိမ်းပြာရောင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု ဖြစ်တည်နေရတာလေ။
ရပ်နားစခန်းမှာ ရပ်တန့်နားနေချိန်များထဲမှာ ဆောင်းဦးကာလဟာ အမြဲတစေ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည် သစ်တောထဲက တစ်ဝက်လောက်သော သစ်ပင်တွေဟာ အရောင်ပြောင်းကုန်သော်လည်း Maple ပင်ကတော့ အရောင် အစုံအလင်စုံးလို့ပြောရမယ်။ လိမ္မော်ရောင်ပြေး၊ အနီရောင် နှင့် အ၀ါရောင် သစ်ရွက်မျိုးစုံဖြင့် ခြယ်သထားသော သက်ရှိ ကင်းဘတ်စ တစ်ချပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ သစ်ပင်တွေဟာ သဘာဝအလှတရားတွေကို တိုက်နံရံမှာ ရောင်စုံဆေးတွေခြယ်မှုန်းသကဲ့သို့ပဲ ဟာမိုနီဖြစ်စွာ ပြသနေခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။
ဒီဆောင်းဦးရာသီဝယ် အဲဒီသစ်ပင်တွေက ပျော်စရာလေးတွေပေးပြန်ပါတယ်။ ဘာတဲ့ ကျွန်တော့်အခေါ် ‘ဟယ်လီကော်ပတာ သေးသေးလေး’တွေလေ။ ကောင်ငယ်ကလေးတစ်ယောက်အတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ ကစားစရာပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ကျွန်တော်ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့လေ အစေ့လေးတွေလည်းတွဲလျက်ပါနေတာကိုး။ အစေ့တစ်စေ့ တိုင်းမှာ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အတောင်ပံလေးတွေနဲ့လေ။ လေတွေတိုက်တိုင်း တ၀ဲလည်လည်နဲ့ လွင့်မျောတတ်ကျသလို သူတို့မိခင် အပင်ကြီးကနေ အဝေးရပ်ဆီကို လေရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာအတိုင်း လိုက်သွားတတ်ကြတယ်။ အတောင်ပံလေးတွေနဲ့ လေရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာ ကိုခရီးနှင်လိုက်ရင်း ကျရာနေရာဒေသတစ်ခုမှာ ဘ၀အသစ်တစ်ခုစတင်ကြသလားလို့။ အခုအချိန်မှာတော့ အတောင်ပံလေးတွေပါတဲ့ အစေ့လေးတွေအကြောင်း စဉ်းစားမိလိုက်တိုင်း သဘာဝတရားတစ်ခုရဲ့ဖန်တီးမှုဟာ ဘယ်လောက် အံ့အားသင့်စရာကောင်းသလဲ အတွေးထဲပေါ်ပေါ်လာတယ်။
ဆောင်းဦးရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်တော့ သစ်ရွက်တွေဟာ စတင်ကြွေဆင်းကြပါပြီ။ ဆောင်းရာသီရောက်ကြောင်း အမှတ်သင်္ကေတတွေ ခပ်မြန်မြန်ရောက်လာသလို ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးသစ်ပင်ကြီးလည်း မကြာခင်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် အိပ်ပျော်ဦးတော့မယ်။ ကျွန်တော် မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ အရောင်စုံသစ်ရွက်ကလေးတွေကို မာမီရဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးတစ်အုပ်ထဲမှာ ညှပ်ညှပ်ပြီးသိမ်းထားမိတတ်ပါတယ် အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေအဖြစ်ပေါ့နော်။
တစ်ခုသော နွေရာသီရက်တစ်ရက်မှာ အပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာ အကိုင်းအခက်အနည်းငယ်ဟာ ကျိုးပျက်ပြီး အပင်ခြေရင်းမှာ လဲလျောင်း နေတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘတွေက ဒါဟာ သဘာဝလို့တွေးထင်ကြပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အတော့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသလို စိတ်ထဲတစ်မျိုးခံစားရပါရဲ့။ ကျွန်တော့်အဖေကတော့ ဒါဟာ လေနီကြမ်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့တွေးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ကျိုးပျက်သွားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ။ တစ်ယောက်ယောက်သောသူ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ရသလဲလို့ ကျွန်တော်အတွေးဝင်မိပါတယ်။ အင်း….ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးအရွယ်ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ အစခရီးတစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲ။
နှစ်တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ တကယ့်ကမ္ဘာလောကကြီးက ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့ပါပြီ။ ခြောက်သွေ့ပူပြင်းသော နွေရာသီတစ်ခုရဲ့ အလယ်အလတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ အသက် ၈နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။ ဟိုးအရင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ယာဉ် ရပ်နားစခန်းမှာ ရပ်တန့်နားနေခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုအကြိမ်မှာတော့ အရင်နဲ့မတူကွဲပြားခြားနားနေခဲ့ပါတယ်။ သစ်တော ဧရိယာအတော် များများ မီးလောင်ထားခဲ့တော့ အမဲရောင်ခြယ်မြင်ကွင်းရယ် မီးခိုးရောင် ပြာမှုန်တွေရယ်ကိုမြင်ခဲ့ရပါရော။ အခုထက်ထိ သစ်ပင်မီးလောင် ထားရာမှ ထွက်သောအနံ့တွေဟာ လေထုထဲပျံ့လွင့်နေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော့် Maple ပင်ကြီးကော?? ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတစေရင်းနီးနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးဆီ ကျွန်တော်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ မြင့်သလောက် ကျိုးပျက်နေတဲ့ မဲမှောင်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ သစ်ကိုင်းတွေလုံးဝမရှိတော့ဟန်ကလွဲ လို့ ဘာမှမရှိတော့။ ကြည့်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က အဲ့ဒီအပင်က သေသွားပြီ ပြန်ပြုစုလို့မရတော့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။
ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအဆောက်အအုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာ အမှိုက်သယ်ယာဉ်အလွတ်တစ်စီးနဲ့အတူ ယာယီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးလို့ယူဆရသူ တစ်ယောက်ကို အဖေက သတိထားမိခဲ့ပုံရတယ်။ အဖေ လျှောက်လှမ်းသွားပြီးနောက် အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ စကားနည်းနည်းပြောကြတယ်။ အဖေပြန်လာပြီးနောက် အဲ့လူကြီးဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တောအုပ်ထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက် စခန်းချခဲ့ပုံပေါ်ပြီး မီးမွှေးခဲ့တာကို သေချာမငြိမ်းသတ်ခဲ့တော့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မြက်ခင်းတွေ ချုံပုတ်တွေကတစ်ဆင့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါတဲ့။ ကံကောင်းတာက လေကြောင်းက သစ်တောအလယ်ပိုင်းဘက်ကိုတိုက်နေတော့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းဘက်ကို သိပ်မလာတော့ဘူးလေ။ မီးသတ်သမားတွေကလည်း အဲ့ထက်မပိုအောင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အဆင်ပြေသွားတာဆိုပဲ။ ကျွန်တော် အဖိုးတို့အဖွားတို့အိမ်ကို သွားရာလမ်းတလျှောက်ဝယ် မရပ်မနားကိုငိုရှိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပျက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရဲ့သွင်ပြင်တွေဟာ အရင်နဲ့အတူတူမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်နားတိုင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ ကြီးမားတဲ့ သစ်ကိုင်းကြီးပေါ်ထိုင်ပြီး ရှုခင်းတွေကိုငေးရတဲ့ ခံစားချက်ကို သတိရ တာကြောင့် သစ်ပင်ကြီးကို အရမ်းလွမ်းဆွတ်ရပါတယ်။ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပင်ပျိုလေးတွေကြောင့် ပြန်လည်အရောင်ပြောင်းလာတဲ့ သစ်တောကြီးဟာ စိမ်းစိုလာခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲခံစားချက် သိပ်မထူးတော့သလိုပါပဲ။ အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ အချိန်တွေ အတော်ယူရဦးမယ်နဲ့တူပါတယ်။ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရပ်နားတဲ့အချိန်မှာတော့ ထိုင်နားတဲ့ စားပွဲခုံက သစ်တောအစပ် မဟုတ်တော့ဘဲ အဆောက်အဦးနဲ့ နီးတဲ့ခုံမှာပဲထိုင်ဖြစ်ကြပါရော။ မိနစ် နှစ်ဆယ်သော ယာဉ်ရပ်နားချိန်ဟာ အရမ်းကြာလွန်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးထင်မိခဲ့သလားပဲ။
ရက်သတ္တပါတ်တွေဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်မှမသွား အိမ်မှာထိုင်နေမိတဲ့ရက်တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော် ကစားစရာအရုပ်တွေထည့်ထား တဲ့ အိတ်ကြီးကိုမွှေရင်း ပလတ်စတစ်နဲ့ထုပ်ထားတဲ့ Maple ပင်ရဲ့အစေ့လေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ခပ်သေးသေး ဟယ်လီကော်ပတာလေးတွေလေ။ ဆောင်းနှောင်းကာလက အမှတ်မထင်သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ လက်ထဲမှာ အစေ့လေးတွေကို ပြန်ကိုင်ကြည့်နေမိရင်း ဘာလုပ်မိမှန်းမသိထလုပ်မိပါတယ်။ အစေ့လေးတွေကိုယူ ပြီးတော့ အိမ်ရဲ့နောက်ဖက် ခြံဝင်းထဲကိုဆင်းသွား တဲ့ပြီး တစ်ဒါဇင်လောက်အစေ့တွေကို မြေကြီးထဲစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ စိုက်ခဲ့တဲ့အစေ့တစ်စေ့တိုင်း နေရာမမှားရ အောင် ရေခဲချောင်း တုတ်တံလေးတစ်ခုစီကိုပါ ထိုးစိုက်ခဲ့တာလေ။ မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ သွားသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပါတ်ပေါင်းများစွာ ပေါက်လာမယ့် ကြီးထွားလာမယ့်အရိပ်အယောင်ရှိမရှိ ကြည့်မိခြင်းပေါ့။ ဘယ်လိုမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူး။
ဆောင်းရာသီ ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သစ်စေ့လေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေကို အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီ ဒီလောက် အေးတဲ့ ကာလရှည်မှာ သူတို့သေလောက်ရောပေါ့နော်။ ကျွန်တော် အိမ်အနောက်ဖက်ကို သွားသွားနေတာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဲ့ဒီသစ်စေ့လေးတွေ ဘယ်လိုအေးခဲသေဆုံးနေတယ်ဆိုတာသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရော။ ပြန်တူးယူထားပြီး နောက်ရာသီမှ ပြန်စိုက်လို့ရနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူတို့…သူတို့တွေဘာဖြစ်နေတယ်ဆို တာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ရေခဲ့ချောင်းတုတ်တံအစီအရီလေးတွေကိုပဲမြင်ရလိမ့်နိုးဆိုတဲ့အသွင်နဲ့သွားပေမယ့် အပင်ငယ်လေးငါးခုရှင်သန်နေတာကိုမြင်လိုက်ရ တာကြောင့် ခုန်ပေါက်ပျော်ရွှင်မိရတယ်ဗျ။ အကိုင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့ အရွက်ငုတ်စိလေးတွေနဲ့ကြည့်ရတာများ ဟီး ဟီး။ ဟိုအရင်က တော့ Maple ပင်ပေါက်လေးတွေကိုမမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် အပင်ပေါက်ကလေးတွေရဲ့ နံဘေးကမြေပြင်ပေါ်ဝယ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး အပင်ငယ်လေး ငါးပင်ကို တကယ့် နုနုညံ့ညံ့လေး ထိတွေ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သစ်ရွက်နုလေးတွေကို -
‘မင်္ဂလာပါ သစ်ပင်ကလေးတွေရေ…. ငါ့နာမည်က ဇာနည်ပါ။ ကမ္ဘာလောကကြီးကနေကြိုဆိုပါတယ်။ မင်းတို့မေမေကလေ ငါ့အတွက် သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတစ်ယောက်ကွ သိလား’
Alex Aung (24 Oct 2014)
Ref: The Boy Who LovedaTree by Robert G. Moons
Labels: ၀တ္ထုတို, ဘာသာပြန်
ကျွန်တော် ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်မယ့်အလုပ်ကလည်း အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်ရာထူးလစ်လပ်မှုဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ ကျွန်တော်နေထိုင်တာနဲ့ မနီးမဝေးမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အတွဲတစ်တွဲနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သူတို့ကလိင်တူချစ်သူတွေပါ။ ဖီလစ်ကတော့ အောက်ချိုင့်ထဲကို ဆင်းသွားရတဲ့နေရာက တိုက်ခန်းမှာနေသလို Victor ကတော့ blocks အနည်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Victor နဲ့က မကြာခဏဆိုသလိုပိုတွေ့ဖြစ်ရပါတယ် အလုပ်ဌာနတူတာကော စားသောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံသဘောညီနေကြတာကြောင့်လဲဖြစ် မယ်။ ကျွန်တော့်လို တိုင်းတစ်ပါးကပြောင်းလာကြသူများမဟုတ်ဘဲ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ညနေဘက် သူတို့ဘာသာစကားကို သိပ်မဝေးတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်သွားသွားတက်ဖို့လည်း အကူအညီရတယ်ဗျ။
ဗစ်တာက ကျွန်တော်ရယ် ဖိလစ်ရယ် နှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးကြည့်ကောင်းသူပါ။ ဖိလစ်ကတော့ သာမန်ရုပ်ရည်မျိုးပဲပိုင်ဆိုင်သူပါပဲ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအဖြစ်ထက်ပိုပြီးမြင်ကြည့်လို့မရခဲ့ဘူးထင်တယ်။ ဗစ်တာရဲ့အသားအရေက တော်တော်ညိုမောင်း ပါတယ်။ စိုပြေတာတော့ရှိတာပေါ့။ မျက်ခုံးမွှေးခပ်ထူထူနဲ့ ဆံပင်တွေက ကောက်ကွေးသေးတယ်…နှုတ်ခမ်းအစုံကတော့ တော်တော် sexy ကျတယ်…..မေးရိုးတွေကခိုင်မာသလို မျက်ဝန်းတွေကလည်း အမြဲလို ရယ်မြူးနေတာပါပဲ။ သူ့အဖေက လူဖြူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တော့ သူ့အမေက စပိန်စကားပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဂေးဖြစ်နေခြင်းအပေါ် မိဘနှစ်ပါးစလုံးက အေးဆေးပဲဗျ။ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တာကော သူ့အသွင်အပြင် သူ့လိင်စိတ်ခံစားချက်အပေါ် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်နေတာကိုရော ကျွန်တော် တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဖြစ်ခဲ့တာ သိပ်တော့မကြာသေးပေမဲ့ သူက ရည်းစားရှာဖို့ကူညီရမလား အလျင်စလိုမလုပ်နဲ့စသဖြင့် စနောက်နေသေးတာလေ။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး နွေရာသီအတွေ့အကြုံကာလလေးမှာ တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ကျွန်တော်စ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဟာ တိုက်ခန်းရဲ့အနောက်ဘက် ဥယျာဉ်လေးထဲမှာ အမြဲလိုလိုတွေ့ဆုံဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့။ ရေကူးကန်လေးလည်းပါတယ် အားကစားခန်းမလည်း ပထမထပ်လောက်မှာပါတယ်ဆိုတော့လေ။ နွေရာသီကတော်တော်လှတယ်ဗျ သိပ်လည်းမပူသလို အရမ်းကြီးလည်း မအေးဘူးနော်။ ဖိလစ်နဲ့ ဗစ်တာက ရေကူးကန်ထဲမှာ ဘာမှမ၀တ်ဘဲ ရေကူးကြဖို့မကြာခဏ ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က သူတို့ထက် လှပတောင့်တင်းပေမယ့် အခြားသော ဂေးတွေရဲ့ရှေ့မှာအ၀တ်မဲ့ဖြစ်ဖို့တော့ ကိုယ့် ဘာသာမလုံခြုံသလို ခံစားရလို့ပါ။ အဲ….ကျွန်တော်နဲ့သိပ်မရင်းနီးသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တော့ အမှောင်ထဲမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်သက်မှုဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ချစ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ အ၀တ်မဲ့နေဖို့ကိုတော့ နည်းနည်း လန့်သလိုလို ရှက်သလိုလိုခံစားရပါရဲ့။
တစ်ရက်သော စနေနေ့ နေ့လည်ပိုင်းဝယ် ဗစ်တာနဲ့ ဖြစ်ပျက်ပတ်သက်မှုတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Margaritas တစ်ခရားထည့် ထားတဲ့ ရေခဲပုံးလေးတစ်ပုံးကို သက်တန့်ရောင်ထီးကြီးအချို့ဖွင့်ထားတဲ့ ခုံစောင်းတွေနားထားထားတယ်….ပြီးတော့ စားစရာသစ်သီး အချို့ထည့်ထားတဲ့ ဗန်းကြီးကိုယူကာပြန်လာတော့ ဖီလစ်ကို သူဝတ်နေကျရေကူးဘောင်းဘီရယ် တီရှပ်တစ်ထည်ရယ်ဝတ်လျက်သား ရေကူးကန်နား တကြွကြွတွေ့ရရော။ ‘ဖိလစ်….ဒီနေ့တော့ ရေမကူးတော့ဘူးလေ’ အဲဒီစကားကို ဗစ်တာနဲ့ ကျွန်တော်မတိုင်ပင်ပဲ တစ်ပြိုင်တည်းလိုပြောမိတာပါ။ တိုင်ပင်ကိုက်သလိုရယ်မိကြစဉ်မှာပဲ ဖန်ခွက်တွေထဲ သောက်စရာကိုငှဲ့ထည့်ပေးကာ သူတို့နှစ်ယောက် ကို ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ “Thanks” ပါတဲ့။ ဖိလစ်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံမှာထိုင် တစ်စိမ့်စိမ့် စကားမပြော ဘဲ သောက်ပါရော။ ရေကူးကန်ဆိုလို့အကြီးကြီးမမှတ်ပါနဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့လိုက်သလောက်ကျယ်ပြီး အနက်ကလည်း ၅ပေလောက်ထိ ပဲရှိတာပါ။ သဘောတော့ကျပါတယ် သဘာဝအတွန့်အခေါက်တွေပါတဲ့ ကြွေပြားတွေကိုကပ်ထားတယ် သန့်ရှင်းတဲ့အငွေ့အသက်ခံစား ရစေတဲ့ ဒီဇိုင်းပါတယ်လေ။ သက်သောင့်သက်သာ ရေစိမ်လို့ရတဲ့ဖြေလျော့မှုတော့ရတာပေါ့။ မြက်ရိတ်ဖို့မလိုလို့တော်သေးတယ် ကျွန်တော်က မြက်ရိတ်ရတာ ပျင်းတယ်ဗျ။
‘ငါ စီဒီအသစ်တွေယူလာတယ်’ ဗစ်တာက စီဒီအိတ်ခပ်ဆန်းဆန်းလေးရယ် ဖွင့်စက် မသေးတသေးလေးရယ်ကို သေတ္တာလေးတစ်ခု ထဲက ထုတ်ယူပြီးပြတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော်အံ့အားသင့်သွားတာ သေတ္တာလေးက သိပ်မကြီးပေမယ့် ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျ ထည့်လို့ရတာကိုး။ ပြီးတော့ ဖွင့်စက်လေးကသေးပေမယ့် အသံကကြည်လင်ပြီးတော့ ခပ်ကျယ်ကျယ်ကိုကြားရတယ်။ အာ…ရင်ခုန်စရာ Club Mixes တွေမဖွင့်ခင် ကျွန်တော်သူ့ကိုတားလိုက်ရမှာဆိုပေမယ့် တီးလုံးသံလေးတွေက ရင်ခုန်သံကိုလှုပ်ရှားစေတာကြောင့် မတားလိုက်မိတာ ကျွန်တော့်အမှားပါ။
“ငါ မင်းကိုဝယ်ဖို့ညွှန်းတာ ဒီလိုစက်မျိုးကိုပြောတာ’ ဗစ်တာက သီချင်းကိုဆက်ဖွင့်လိုက်ရင်းပြောတယ်။
‘ရယ်စရာပဲနော် ငါလိုချင်တာတွေမှန်သမျှ မင်းရနေတာကြီးပဲ’ လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူ့အပေါ်ဦးခေါင်းကော အောက်က ခေါင်းကရော တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်တာကို သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ အမျိုးအမည်မသိ အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာပါရဲ့။ ကျွန်တော် လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်ခွက်ထဲက ပိုက်ကိုအသာစုပ်လိုက်ရင် တံတွေးကိုပါရောယောင်မျိုချလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူ့ကို ‘ဒါဆို အဲ့လိုစက်မျိုးဝယ်ထားသင့်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား?’ လို့မေးလိုက်တယ်။
‘အေး..’ ပထမဆုံးသီချင်းသံက ဒရမ်သံခပ်ရှည်ရှည်ပါသော အသံဆူဆူဖြင့် စတင်လာပါတယ်။ ဗစ်တာ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေကို သူလှဲလျောင်းနေတဲ့ ခုံစောင်းရှည်လက်ရမ်းများပေါ် တီးလုံးသံနဲ့အတူ တတောက်တောက်ခေါက်နေရော။ ရုတ်တရက် ‘ဒီတော့…. မင်းလိုချင်နေတာ ငါ့မှာရှိနေမလားပဲ’ လို့ သူ့တီရှပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို မသိမသာစိုက်ကြည့်ရင်းပြောတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အဖြေစကားတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေ။
ကျွန်တော်လည်း သောက်လက်စ Margaritas ကိုအကုန်စုပ်သောက်လိုက်ပြီးနောက် စားပွဲပုလေးတစ်ခုပေါ်တင်လိုက်ကာ ၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကို သူ့လိုချွတ်လိုက်တယ်။ အာ….ကျွန်တော် ထိန်းထားတဲ့စိတ်တွေလွတ်သွားပြီးနောက် ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုကိုပါ ကန်ချွတ် ပစ်လိုက်မိတော့ သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာ အံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားကြသဗျ။ ‘မသိဘူးလေ၊ မင်း ငါ့အနားလာရင်တော့ ရှာလို့ရမလားဘဲ’
ဗစ်တာ ထရပ်ကာ ကျွန်တော့်အနားကိုကပ်လာတယ်။ သူ့လက်က Margaritas ခွက်ကိုလည်း ခုံပုလေးပေါ်အလားတူချလိုက်ရင်း သူ့ဘောင်းဘီကိုလည်း ဆွဲချပစ်လိုက်တယ် အောက်ကိုပေါ့။ ဟိုအရင်က ကျွန်တော်တို့ အတူတူရေကူးကြတာအကြိမ်ရေ အတော်များများရှိပါပြီ ဒါပေမဲ့ ခါးမှာ တဘက်လေးတွေပတ်ပြီးမှ ရေကူးကန်နားလာကြတာဆိုတော့ တကိုယ်လုံးအ၀တ်မပါတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ခပ်ပါးပါး သူ့ဘောင်းဘီခွဆုံက အဖုအဖောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး တော်တော်တော့ထွားမယ်လို့မှန်းခဲ့ဖူး ပါတယ်။ ၀ိုး….ရွှေဥကြီးတွေက လုံးဝန်းပြီးနည်းနည်းတွဲကျနေသလို အတံကြီးကလည်း ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာ တော်တော်ထွား တယ်လို့ဆိုရမယ်။ မကြာခဏ ကျွန်တော့်စိတ်ကို မရိုးမရွဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းကြီးထင်ပါရဲ့။
သူ့ပစ္စည်းကြီးကို ကျွန်တော်တို့ထိမိတဲ့ခဏ တဖြည်းဖြည်းထွားလာတာကို မြင်ရသလို နွေးပြီး နုညံ့တဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ်။ အာ…..သီချင်းသံက နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းသွားသလို ပိုပြီးရင်ခုန်သံကိုဆူလာစေသလိုပါပဲ။
‘မင်း ငါမေးတာကို မဖြေသေးဘူးနော်’ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တစားကစားနေတုန်း ဗစ်တာနှုတ်ဖျားကနေ အမေးသံထွက် လာတယ်။
‘အဖြေက….Yes ပေါ့ကွ မင်းကလဲ’ ကျွန်တော်သူ့ကိုမော့မကြည့်ဘဲ ပြန်ဖြေမိလိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာဝယ် မချိုမချဉ် မ၀ံ့မရဲ အပြုံးတစ်ခုတော့ တွဲလွဲခိုနေတာကို နေ့အလင်းရောင်နဲ့အတူ သူမြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ငပဲက တဖြည်းဖြည်းမာတောင့်လာတာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာတောင်မမြဲတော့သလို ရွှေဥတွေကို နမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုတွန်းတိုက်နေတာများ အားရစရာပါ။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်လေးတွေကို သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ထိုးဖွပေးတယ်…..ငပဲကြီးကို ကျွန်တော့်ပါးပြင်တလျောက်ပွတ်သပ်မိပြန်တော့ ပူနွေးနေတဲ့အထိအတွေ့ သွေးကြောတွေရဲ့ တဆတ်ဆတ် သွေးတိုးနေမှုတွေကို ခံစားနေရသလို သူ့ဆီးစပ် အမွှေးခပ်စုစုလေးဆီကနေရနေသော မွှေးရနံ့လေးကလည်း တမျိုးတစ်ဖုံ ကျွန်တော့် အတွက် လိင်ဆွဲဆောင်မှုပြုနေသလိုခံစားရပါတယ်။
ဘဲဥလေးတွေလို လုံးဝန်းနေတဲ့ သူ့ရွှေဥလေးတွေကို ကျွန်တော့်နှာတံလေးတွေနဲ့ တို့ထိနမ်းမိသလို လျှာကိုအပြားလိုက်ထားကာ ရွှေဥ ကနေ လိင်တံထိပ်ပိုင်း ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကို လျက်ပြုလိုက်တယ်။ အတံကိုကျွန်တော့်လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ထားရင်း ကွမ်းသီး ခေါင်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တော့ ဗစ်တာတစ်ယောက် သက်ပြင်းတွေအခါခါချပါရော။
ကြီးမားသော သံခမောက်တစ်လုံမှောက်ချထားသလိုဖြစ်နေသော သူ့ငပဲခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ညှပ်ဆွဲသလို လက်ကလည်း ငပဲကြီးကို အထက်အောက် ပွတ်သပ်ပြီး လက်ကစားပေးလှုပ်ရှားပေးရပါတယ်။ ဟစိဟစိဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲခေါင်းထိပ်က အပေါက်လေး ကိုလည်း လျှာဖျားချွန်ချွန်လေးနဲ့ ထိုးထိုးပြီး ကလိရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်လိုပါပဲ သူလည်း ရင်ထဲကနေ လှိုက်မောနေတယ်ထင်ပါ့ ကျွန်တော့် ပခုံးနှစ်ဖက်ကို သူ့လက်အစုံနဲ့ထိန်းထိန်းကိုင်ရင်း အသံတွေလည်း အားမလိုအားမရထွက်ပြုလာရော။
သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်စတင်ပြီး-ုပ်နေပါပြီ…..လျှာဖျားလေးကလည်း သွေးကြောဂလင်းတွေ အကြောဆုံနေရာတွေကို ကလိရသေးတာပေါ့။ ဗစ်တာ ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကို ဖျစ်ညှစ်ပြီးနောက် ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတော့တယ် သိပ်မကြာပါဘူး။
သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေက သူ့ငပဲအရှည်ကြီးကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲတဆုံးထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတိုင်းပဲ အထုတ်အသွင်းက သွက်သွက် လာတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ကျွန်တော်ကလက်နဲ့ထိန်းကိုင်လိုက်တာကြောင့်သဘောပေါက်သွားပြီး ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်တဲ့အနေ အထားအတိုင်း မနှေးမမြန်လုပ်ပါရော။ ပထမတော့ ခပ်ဖြေးဖြေးအပြင်ကို တစ်ချက်ခြင်းဆွဲထုတ်လိုက် လျောကနဲအဆုံးထိဖိသွင်းလိုက် လုပ်သေးတာပါ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်လျှာတွေနှုတ်ခမ်းတွေရဲ့ကြားမှာ သူဘယ်လိုခံစားရတယ်မသိဘူး အရှိန်မြှင့်ကာ အထုတ် အသွင်းတွေလုပ်တော့တယ်။ သူ့တင်ပါးတွေကို ကျစ်ကျစ်ပြီးအားယူကာ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့မြန်မြန် -ိုးတော့တယ် ပါးစပ်ကိုလေ။ သူ ကျွန်တော့်ပြုစုတဲ့ အရည်အချင်းကိုဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ သိချင်မိပေမယ့် သူ့အမူအယာကိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်စွမ်းဆောင် ချက်က သူ့အတွက် အလုပ်အတော်ဖြစ်တဲ့ဟန်ပေါက်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ကြည့်ရတာ ချွေးတွေတစိုစိုဖြစ်လာတော့မှ ကြွက်သား မြှောင်းတွေကိုမြင်လာရတယ် အသားဖြူခြင်းက ကြွက်သားအလှကိုမပြနိုင်ဘူးကိုး။ ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကိုဖျစ်ညှစ်လိုက် ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို ထိန်းကိုင်လိုက်နဲ့ ပါးစပ်ကလည်း မိန့်မူးသာယာသံတွေနဲ့ အော်ညည်းနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သည်လည်း စိတ်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာကို မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်လိုက်ပါသွားမိပါပြီ။ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ တဆုံး ၀င်ဝင်နေတာကိုလည်း သဘောကျလာသလို သူ့တင်ပါးအစုံကိုထိန်းထိန်းကိုင်ပေးရတာကိုလည်း ကြိုက်လာသလိုပဲ။ သူ့လက်အစုံကို ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံအပေါ် သေချာတင်ပြီး အားပြုစေလိုက်ကာ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့တင်ပါးကိုစုံကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲယူရင်း ပါးစပ်နှင့် ငပဲ စည်းချက်ညီလှုပ်ရှားပစ်လိုက်တယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် စိတ်ထဲရှိသလောက် သောင်းကြမ်းပစ်လိုက်ချင်တာ ဘာမှမထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့လေ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲသာမက လည်မျို ထဲထိတိုင် သူ့ငပဲရှည်ကြီးထိုးထိုးထည့်တာကို သဘောကျတယ်။ သူလည်း အဲ့လိုလုပ်ရတာကို ရူးရူးမူးမူးကို ကြိုက်ပြီးလိုချင်နေတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖွ ပခုံးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး သူအားပြုချင်သလောက်ပြု သတိမထားတော့ပါဘူး။
သူ ကျွန်တော့်အထာကိုပေါက်သွားဟန်တူတယ် အရမ်းကြီး မကြမ်းတော့ဘဲ ငပဲကို အဆုံးထိဖိသွင်းလို့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိရောက်အောင် ဆွဲထုတ်လိုက်….အို…..ဆီးစပ်က အမွှေးနုတွေနဲ့ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းတွေဖိကပ်သွားတဲ့အထိ လျောကနဲဖိလိုက်လုပ်တာ ချွေးစိုနေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာနဲ့တောင် ကပ်သွားမလားထင်ရတယ်။ အထုတ်အသွင်း စည်းချက်တွေဟာ သီချင်းဖွင့်စက်ကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့ တီးလုံးသံ အနှေးအမြန် အကြမ်းအနုတွေအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်းဖြစ်နေသလိုပဲ….ဒရမ်သံခပ်မြန်မြန်။
‘ကလင် …..ကလင်…..ကလင်’ ရုတ်တရက်ဆိုသလို တံခါးဘဲလ်သံကိုကြားရတာကြောင့် ဘောင်းဘီတိုကောက်စွပ်ပြီးသွားကြည့်တော့ အိမ်နီးချင်းအခန်းက ကောင်လေးက ကျွန်တော့်အခန်းတံခါးပွင့်ပြီး ဟနေတာတွေ့လို့ လူရှိလား မရှိဘူးလား ဘဲလ်တီးကြည့်တာပါတဲ့။ အင်း…..ကျွန်တော်တို့က အခန်းရဲ့ ဟိုးအနောက်ဘက် အဖီဆောင်ဖက်ကိုရောက်နေကြတာလည်းပါတယ် ခဏနေက သေချာပေါက် အ၀င်သံတံခါးကို သော့ခတ်ခဲ့တာလည်းပါတယ်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်တော့ ကျွန်တော် လန့်ဖြန့်သွားရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗစ်တာနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် တိမ်းမူးနေတဲ့အချိန် အခန်းထဲမှာ ဖီလစ်လဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လွတ်သွားတာလည်း ပါမယ်။ အခုတော့…..ဖိလစ်တစ်ယောက်ထွက်သွားခဲ့တာကို ကျွန်တော် သတိကိုမရခဲ့မိတာလေ။ ဟူး……Sorry Philip.
ဗစ်တာရဲ့ နုညံ့သော စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အနမ်းမှာ လှိုက်မောသွားတယ်…..ကျွန်တော့်ရင်အုပ်က ကြွက်သားတွေကို သူဆော့ကစား တာမှာ သာယာသွားမိတာလည်းဖြစ်မယ်….လည်တိုင်လေးကို လေပူနွေးနွေးလေးတိုးဝေ့နေတဲ့အပေါ်သာယာပြီး ခံစားမှုအဟုန်မြင့်တက် မှာစိုးရိမ်ပြီး ထိမ်းနေမိတာလည်းပါမယ်….ခံစားမှု ဒီရေတွေမြင့်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘဲ ejecting ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်မိတာကိုး။ ဗစ်တာရဲ့ ကကြိုးတွေထဲမှာ ကျွန်တော် လျင်လျင်မြန်မြန် စီးမျောသွားမိတော့ ဖိလစ်ကို မဖိတ်ခေါ်မိခဲ့တော့ဘူး။
ဗစ်တာ စားပွဲပုလေးပေါ်က လက်ကျန် Margaritas လေးကိုမော့နေတယ်။ နည်းနည်းလေးပဲကျန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဖန်ခွက်လေးထဲ ကိုလည်းဖြည့်ထားပေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်လာတာကိုလည်းမြင်ရော ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ သူ့ဟန်လေးကိုကြည့်မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏ ကျွန်တော် ရင်တွေအရမ်းခုန်သွားမိပါရော။ အ၀တ်မဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးဟာလည်း ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်သံတွေပြန်ဆူဝေလာစေပါရဲ့။
ကျွန်တော် ဖန်ခွက်လေးကို အသာယူပြီး နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ကာ စုပ်ယူမျိုချလိုက်စဉ်ခဏ ဗစ်တာ ကျွန်တော့်အနားကပ်လာကာ ကျွန်တော့်ကို ထွေးဖက်သလို လည်တိုင်လေးတလျောက် အနမ်းပေးတာ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထရပါတယ်။
‘အ၀င်သံတံခါး သော့သေချာမခတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ငါ မင်းကို သတိပေးသင့်တာပါ’ သူက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ မရည်ရွယ်ပါပဲ သူ့ရဲ့ပျော့ပျောင်းစငပဲကို တို့ထိမိပါတယ်။ အဲဒါကြီးက ပျော့သာပျော့တာ ကြီးနေတုန်းပါပဲ။ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝလေးက တော့အရည်ကြည်အချို့စို့နေဟန်ရှိသဗျ။
‘ငါ ခတ်ခဲ့ပါတယ်ကွာ’ လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေပြူးကျယ်သွားတယ်။
‘စကားမစပ် ဒီနေ့ရေကူးတာ အ၀တ်မပါဘဲကူးဖို့ စီစဉ်ထားတာလား’
‘မဟုတ်ဘူးကွ….မင်းတိုက်တဲ့ Margaritas ကိုသောက်ပြီးတော့မှ စိတ်ကူးရသွားတာ’
‘ဒါပေမဲ့….အခုလိုဖြစ်ဖို့ကိုတော့ မင်းစီစဉ် စိတ်ကူးထားတယ်မဟုတ်လား’
‘တကယ်??’ ကျွန်တော် သူ့ကိုအံ့အားတသင့်မေးမိရပါတယ်။ ‘ငါ အဲဒါကို သတိမထားမိခဲ့ဘူးကွ၊ ပြီးတော့ ငါတို့နှစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းတွေလို့ပဲခံယူထားတာလေ’
‘ငါလည်း အဲ့လိုပဲလေ…..ဒါပေမဲ့ ငါတို့အဲ့ထက်ပိုပြီး တစ်ခုခုလုပ်လို့မရဘူးလားဟ’
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ခဏတော့ စကားပြောနေမိကြပါတယ် ခုံတန်လျားပေါ် အတူထိုင်ကြရင်းပေါ့။ ကျွန်တော်လက်ထဲက ဖျော်ရည်လက်ကျန်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ရေကူးကန်ထဲကို ခုန်ချလိုက်ကြပါတယ် အ၀တ်မပါဘဲ ပေါ့နော်။
ရေအတူကူးခတ်ကြတယ်….တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရေပက်ကစားကြတယ်…..မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက် ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လောက်စွဲလမ်း ပျော်ရွှင်နေကြကြောင်း သတိမူမိစေတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ရေကူးကန်နံရံကို ကျွန်တော် ကျော ကပ်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗစ်တာက ကျွန်တော့်ကိုတိုးဖက်လိုက်ရင်း အနမ်းမုန်တိုင်းထန်ပါတယ်။ နုညံ့တဲ့သူ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်တွေနောက်မှာ စက်ယှက်နေရင်းမှာ နှုတ်ခမ်းသားခြင်း ပူးကပ်နေကြတာ တသားထဲပါပဲ။ ပေါင်ကြားတွေက ငပဲတွေ ဟာ အချင်းချင်းတို့ထိကာ ဟိုထိုးသည်ထိုးဖြစ်နေကြတာပေါ့။
‘မင်းကို အပေါ်မတင်ပေးရမလားဟင်?’ လို့ ဗစ်တာက ရုတ်တရက်မေးတယ်။
သူဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မေးသင့်ပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာမှမတုန့်ပြန်ခင်မှာပဲ ခါးအစုံကနေမချီတဲ့ပြီး ရေကူးကန်ဘောင်ပေါ်ကို ကျွန်တော့်ကို မတင်လိုက်တယ်ဗျ။ စိုရွှဲနေတဲ့ ရေကူးကန်ဘေးက ကြွေပြားတွေပေါ် တင်သားဆိုင်များဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရပြီပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား စကားပြောကြတိုင်း သူ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော်ပေါင်ခြံကြားမှာရောက်နေသလိုဖြစ်နေပြီး သူက ကျွန်တော့် မျက်နှာကို အပြုံးချိုချိုဖြင့်မော့ကြည့်လိုက် ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ထွားထွားတွေကို သူ့လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက်လုပ်တယ်လေ။ ကျွန်တော် မနေတတ်စွာ ဖင်တကြွကြွဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့တယ် ပြီးတော့ ပေါင်တံတလျောက် မွတ်သိပ်စွာ အနမ်းတွေပေးပါရော။
သူပေးတဲ့ အပြုအစုအထိအတွေ့တွေကြောင့် ကျွန်တော် ပါးစပ်တွေဟ သက်ပြင်းတွေအခါခါချရင်း ကြက်သီးတွေထလာမိတဲ့အထိ ရင်ခုန်မိလာပါတယ်။ အခြားသောသူတွေလို ခပ်သွက်သွက် ခပ်ပြင်းပြင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့မတူ တကယ့်ကို နုညံ့ငြင်သာတဲ့တို့ထိ ကလိမှု တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အပျိုစင်တစ်ယောက်လို မရိုးမရွဖြစ်တဲ့အထိ ခံစားမိရစေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ဗစ်တာလောက် မထွားပေမယ့် လူတိုင်းက ဆိုဒ်ဂိုက်အပြည့်လို့ သတိပြုမိတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိပါရဲ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ကျွန်တော်ထင့်နေသလို ငပဲဆိုဒ်အပေါ် အာရုံစိုက်မနေဘဲ နှစ်လိုတပ်မက်စွာဖြင့်ရှိနေသလို သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော်ပေါင်တံတွေကတဆစ့် ရွှေဥတွေကို စတင် ပွတ်သပ်ပါတော့တယ်။ နေ့လယ်နေ့ခင်း တောက်ပနေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကို လှမ်းမျှော်မြင်နေရချိန် စနေနေ့နေ့လယ်ခင်းလေး တစ်ခုဟာ မမျှော်လင့်သော မရိုးမရွ လိင်ဆွဲဆောင်မှုခံစားချက်များဖြင့် ပြည့်နှက်သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့် ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်ပြီးသကာလ လိင်တံအရင်းကနေ အဖျားထိတိုင် အပြန်အလှန် လျှာနဲ့ကလိကာ ထိပ်ပိုင်းလေး ကို သူ-ုပ်ပြုပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ အမြင့်ဆုံးခံစားချက် climax မဖြစ်ခင်လေးမှာ ကျွန်တော်သူ့ကိုဆက်မလုပ်ဖို့တားမြစ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ရေကူးကန်ကနေ အပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆွဲခေါ်လိုက်တယ် ကူညီလိုက်တယ်။ စကားတော့မပြောကြဘူး တဘက်လည်း ခါးမှာမပတ်ဖြစ်ကြ သီချင်းဖွင့်စက်ကိုလည်း ပိတ်ပစ်လိုက်ကာ အတွင်းဘက်ပိုင်းဆီကို အ၀တ်မဲ့လျှောက်ဝင်ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
‘ငါတို့ အိပ်ယာထဲသွားကြမလား?’ ဗစ်တာကမေးတယ်ဗျ။
ကျွန်တော် တုန့်ဆိုင်းတုန့်ဆိုင်းမဖြစ်ဘဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ‘Yes’ ပေါ့။
နှစ်ဦးသား အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ကြစဉ်မှာတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ အမွှေးနုလေးတွေဖုံးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေပေါ်ကို ပြေးလွှားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က အိပ်ယာပေါ်မှာပက်လက် သူက ကျွန်တော့်ဘက်ကိုမျက်နှာမူဘေးတစောင်းလှဲပြီးတော့ကလိ နေတာ။ သူ့ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုကိုပြောချင် မေးချင်နေသလိုပဲဗျ။
‘ဘာလဲ?’ ကျွန်တော်သူ့လက်အစုံကို ပြန်လည်ကိုင်တွယ်လိုက်ပြီး ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်နေမိပါတယ်။ နုညံ့နွေးထွေးလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ပေါင်ခြံတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ အင်္ဂါအစိအတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အထိအခိုက်မခံ နုညံ့မှုမျိုးလိုပါပဲလား။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသား ခဏတာပွတ်သပ်နေကြပြီးနောက် အိပ်ခန်းရှိရာကို ထသွားလိုက်ကြပါတယ် အတူတကွ။
‘အဲ….ငါလည်းမင်းကို အဲလို ပြန်ပြီးပြုစုချင်တယ်ကွာ’
သူ့ပြောစကားတွေ အပွတ်အသပ်အကိုင်အတွယ်တွေထက် ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုနှိုးဆွတဲ့ အပြုအမူတွေကို သူ အနမ်းခပ်ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ စတင်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ပေါင်ကြားက မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကိုငုံ့ကြည့်လိုက်စဉ်မှာတော့ ပန်းသွေးရောင်တောက်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရသလို တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဦးခေါင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ သူ့ပါးစပ်က အထုတ်အသွင်း တပြွတ်ပြွတ်အသံတွေကိုကြားရပါတယ်။ အိုး…သူ ကျွန်တော် သူ့ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်း သူကြိုးစားလုပ်ပေးနေတာပဲလေ။ ကျွန်တော် သူ့ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့် ထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ရပ်တန့်စေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ရာပေါ်ကိုပက်လက်အိပ်စေလိုက်ရင်း သူ့ပါးစပ်နားကို ကျွန်တော်ကားယားခွ လိုက်တော့ 69 အနေအထားဖြစ်သွားရော။ ကျွန်တော်သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို အသာပြန်ပြီးငုံထွေးဖြစ်တော့ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကိုအားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း အတန်ကြာငြိမ်သက်ပြီး အရသာခံနေသေးတာပါ။ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်ပေါင်သားတွေကို မက်မက်မောမော့နမ်းလိုက် ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲတဆုံးထည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို အားလုံးထည့်ဖို့မကြိုးစား ဘဲ ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲ တကယ့်ကိုမှ ငြင်ငြင်သာသာလေး ကစားပေးနေမိပါတယ်။ သူ့ရွှေဥတွေကိုလည်း အသာပွတ်သပ်ရင်းပေါ့။
ခဏနေတော့ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲတစ်ဝက်လောက်အထိထည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ကြပ်နေအောင်စေ့ထားပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီးတော့မှ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးလည်မျိုထဲထိတိုင် ကြိုးစားသွင်း ကြည့်မိတာပေါ့ ဘယ်လောက်များသွင်းနိုင်မလဲလို့လေ။ တစ်ချက် တစ်ချက် ကျွန်တော် ကြိုးစားလိုက်တိုင်း ဗစ်တာနှုတ်ဖျားက တမ်းတမ်း တတ မိန့်မူးတဲ့ အသံတွေ တစ်လှေကြီးထွက်ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော့် ပေါင်သားနှစ်ဖက်ကို တရှုံ့ရှုံ့အနမ်းပေးသလို ထွေးပိုက်ဖို့လည်း ကြိုးစားပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော် ဆက်လက်ပြုစုလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို အရင်းကနေဆုပ်ကိုင်ကာ ရွှေဥ တွေကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် ငုံစုပ်လိုက်လုပ်ပါတယ်။
နောက်တော့ နည်းနည်း ခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲအခြေကို သေချာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ငပဲခေါင်းကို သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့နမ်း တယ်။ ပါးစပ်ထဲကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေးနဲ့သွင်းရော။ အထုတ်အသွင်း ခဏလုပ်ပြီးနောက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်း ဧရိယာတစ်ဝိုက်ကို လျှာနဲ့ အမျိုးမျိုးလျက်ပြုကလိပါတော့တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းအောက်က အကြောဆိုင် သိုင်းကြိုးကိုသူ သဘောကျပုံရသဗျ။
ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ထားရတာကိုရော ရွှေဥတွေကို ငုံစုပ်လိုက် လျက်ပြုလိုက်လုပ်ရတာရော ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တွေကို တပြွတ်ပြွတ် အနမ်းချွေရတာကိုသဘောကျပုံပေါ်တယ် အပြန်ပြန်အလှန်လှန်လုပ်နေတော့တာပါ။ အနည်းဆုံး ကျွန်တော့်ငပဲ ခေါင်းကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး မစုပ်ခင် အမြဲလိုလို အပေါက်လေးကို လျှာဖျားနဲ့အမြဲကလိပြီးမှလုပ်တယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ထို့အတူ လုပ်တာပါပဲ ဒါပေမဲ့ တကယ့်မရိုးမရွဖြစ်အောင် slow motion လေး ရွရွလေးလုပ်တာများ သူလည်း သုက်ရည်တွေကို ပန်းမထုတ်ခင် ကျွန်တော်သည်လည်း ပန်းမထုတ်ခင်အထိပါပဲ။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲအရင်းကို သေချာဆုပ်ကိုင် နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပြီးကြပ်နေအောင်လုပ်ပြီးမှ လည်မျိုထဲထိတိုင်ထည့်တာ နည်းနည်းတော့ အော့အံမိမလိုဖြစ်သေးတာပေါ့။ အရင်က ဒီလောက်ထွားတဲ့ငပဲမျိုး တစ်ခါဖူးမျှမကြိုးစားဘူး မလုပ်ဘူးတာကိုး။ အသံတွေခပ်ကျယ်ကျယ် ထွက်လည်း ဂရုစိုက်စရာမလို စိတ်လိုလက်ရဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးကြတယ်။ ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုလည်းမပျက် သူ့လှုပ်ရှားမှုလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဆိုတော့ နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာဖြစ်နေကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲ အောက်ပိုင်းကို သူလက်ကစားနေတုန်း ထိပ်ပိုင်းကိုတော့ သူ့လျှာပူပူနွေးနွေးကြီးနဲ့လျက်ပြုနေတာများတယ်။ ကျွန်တော်လည်းထို့အတူပါပဲလေ။
ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံတွေက သူ့ပြုစုမှုရဲ့ထိရောက်ပုံကို သိစေသလို သူ့နှုတ်ဖျားက အော်ဟစ်မှုကလည်း စိတ်ထန်စေ ပါတယ်။ ရုတ်တရက် သူ့ရွှေဥတွေလှုပ်ရှားမှုကို သတိထားမိသလို သူ့တင်ပါးတွေ ကျစ်ကျစ်သွားတာကိုလည်း သတိမူမိတာကြောင့် သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲကထုတ်လိုက်ပြီး လက်ကစားတာကိုပဲဆက်လုပ်လိုက်တယ်။ သူ့အသက်ရှူသံတွေ အရှိန်မြင့်သွားပြီးနောက်မှာတော့ တဆတ်ဆတ်ခါသွားတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေပေါ် သူ့သုက်ရည်တွေ ဖွေးကနဲ ဖွေးကနဲဖြစ်သွားပါ တယ်။ သူ ပန်းထုတ်သွားပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တွင်မှ ကျွန်တော်သည်လည်း ခြေဖျားတွေ တဆတ်ဆတ်ခါသွားရင်း သုက်ရည်အများအပြားကို ပန်းထုတ်ပစ်မိပါရဲ့။ အများအပြားသူ့ပါးစပ်ထဲရောက်သွားပြီးမှ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပါးစပ်ဟပြီးထုတ်လိုက်တာ သုတ်ရင်အချို့ဟာ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်နဲ့ ဗိုက်သားတွေပေါ်ကျသွားရပါရော။
ဗစ်တာကိုကြည့်ရတာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့် ကျေနပ်ကြည်နူးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် သူ ကျွန်တော့်အပေါ်စွဲလမ်းမှု ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်လေ။ ကိစ္စပြီးမှာ ဘေးဘီကြည့်မိတာ ညနေစောင်းတောင်ဖြစ်သွားပြီပဲ။ နှစ်ဦးသား အပြန်အလှန်ဖက်တွက်ပြီးနောက် အိပ်မောကျသွားကြပါတယ်။
နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား နိုးလာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံကြတယ် ခင်မင်ကြတယ် အလုပ်အတူတူလုပ်ကြတယ် ပြီးတော့ သူ ကျွန်တော့်ကို သဘောကျသလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီထက်ပိုချင်ပေမယ့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပျက်သွားရမှာ ငြင်းပယ်ခံရမှာတွေကြောက်တာကြောင့် သူဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အစအဆုံးသူ ပြောပြပါတယ်။ သူ့ပြောဆိုပုံတွေအရ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာနေရမှာထက်ပိုပြီး အခြားအရာတွေကို မလိုချင်ပုံပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို တောင့်တင်းလှတဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ကြင်ကြင်နာနာထွေးဖက်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ဦးသား စကားပြောနေလိုက်ကြတာ နာရီပေါင်းများစွာပါပဲ။
နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာပေါ်က ညသန်းခေါင်ယံမှထထိုင်ကြပြီး မီးဖိုချောင်ထဲမတိုင်ပင်ဘဲဝင်သွားမိကြတယ်။ ရေဒီယိုလေးကို ခပ်တိုးတိုးဖွင့်လိုက်ရင်း နှစ်ယောက်သားအတွက် ကျွန်တော် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်လိုက်ကာ အားရပါးရစားကြတာပေါ့။ သူ တစ်ကိုက် နှစ်ကိုက်လောက် စားအပြီးမှာတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ ဘယ်လောက်လှကြောင်း အဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ထိတွေ့ရတာ အရမ်းမိုက်ကြောင်း ကျွန်တော် မရည်ရွယ်ဘဲပြောလိုက်မိပါတယ်။
‘ဘယ်လို?’ သူက စားလက်စကိုရပ်ရင်းမေးတယ်။
‘ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ မင်းကို ငါ ဘယ်လောက်ကြိုက်နှစ်သက်မိတယ်….ပြီးတော့ မင်းအနားမှာနေရတာဘယ်လောက်သဘောကျတယ်ဆို တာ သတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ပြောတာ’
‘နောက်ဖေးက ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးကထဲက မင်းရှက်နေတာလေးကိုပဲ မြင်ချင်နေတာဗျ’ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဖြစ်နေတာကို ကြည်ကြည်နူးနူး ပြောလိုက်မိတယ်။
သူ့လက်ထဲက အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို နောက်ဆုံးတစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်ပြီးနောက် သူ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီးကြည့်တယ်။ မြိုချလိုက်ပြီး နောက် ‘အင်း…..ထုံးစံအတိုင်းဆို ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ငါသိပ်စဉ်းစားလေ့မရှိဘူး။ ကြည့်ရတာ ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ခုခုတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်နေပြီထင်တယ်’
စကားမပြောဖြစ်ကြဘဲ အတန်ကြာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိုက်ကြည့်ကာ ထိုင်နေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ နှစ်ယောက် သား အိပ်ရာရှိရာကိုပြန်မသွားခင် ကျွန်တော် စကားတစ်ခွန်းတော့ ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ် ‘ဒီအခြေအနေလေးကို ငါတို့ဆက်ပြီး ထိန်းထားကြတာပေါ့’ လို့။
Alex Aung (16 Oct 2014)